I-Horoscope ye-Scorpio: izibikezelo zezinkanyezi ze-2015 zamadoda nabesifazane
I-Horoscope ye-2015 ye-Scorpio
i-horoscope ye-scorpion ka-2015
Ngo-2015, abameleli beSignor uphawu bangasongelwa ukungabi namandla okudala, ukunganaki nokuntula ukoma umsebenzi. Konke lokhu kungenxa yokuthi ithonya likaPluto, elinye lamaplanethi amakhulu abusa lesi sibonakaliso, lizohliswa kakhulu uma kuqhathaniswa nonyaka odlule. Ungavumeli ukuhamba kwezandla zakho - kancane kancane ungene isigqi esisha, ngisho noma kubonakala kuwe ukuthi akuyona esheshayo njengangaphambili. Ukuhamba okunciphise kuzokuvumela ukuba ugweme izinqumo ezingathandeki kanye namaphutha okwenziwe ngenxa yokungalindeleki, ukuze ekugcineni uzothola. Kulo nyaka, isaga "hamba ngokuthula - uzoqhubeka" I-Scorpio iyafaneleka kakhulu.
I-Horoscope ye-Scorpio wesifazane ngo-2015
Bobabili imfundo kanye nomsebenzi ngonyaka ka-2015 kuzobonakala sengathi ama-Scorpios ngumthwalo osindayo, futhi izinkanyezi zeluleka ukugxilisa ekuhlanganiseni impumelelo ekhona kakade. Mhlawumbe, izinyathelo ezintsha nokutholakala esikhathini esizayo esiseduze ngeke zilandele (okungenani kuze kube sekuqaleni kwekwindla), kodwa isisekelo esikhona esidinga ukusekelwa. Usizo olungalindelekile lungabuka eqenjini - uzobona ukuthi ozakwabo bakuthanda ngempela ngenhlonipho enkulu, ngisho noma ungakaqapheli ngaphambili.
Impilo izokhathaza abesifazane baseScorpio ngenxa yokucindezeleka nokunciphisa ngokugcwele amandla.
Shintsha kabusha imithwalo yemfanelo yakho, ususe ingxenye yomthwalo wemfanelo futhi uthathe isikhathi sokunakekela izinzwa zakho. Uzozuza ngamavithamini, ikakhulukazi lawo anensimbi - azokusekela ngesikhathi sekuseni kwentwasahlobo nasekwindla. Qaphela ukudla: amajusi, imifino nezithelo, fresh noma ngendlela yokudla okusemathinini, kuzoqinisa amandla akho.
Owesifazane onesizungu U-Scorpions uzobonakala sengathi akekho iphuzu ekufuneni othile ngobuhlobo kulo nyaka, kodwa izinkanyezi zeluleka ukuba zingalahli. Ukukhathazeka okuhlotshaniswa nokuseshwa kungalimaza, ngakho-ke zama ukuyeka isimo futhi uxhumane nabanye ngokukhululekile, ngaphandle kokwakha noma yiziphi izinhlelo ku-akhawunti yabo. Enhliziyweni yanoma yibuphi ubudlelwane obuqinile, uma ubufuna, kukhona ubungane nokubukwa okuvamile, ngakho kungenzeka ukuthi iningi losesho, elibonakala kuwe cishe ngaphambi komsebenzi, lizodlula ngokwalo, licele ikusasa ngesiqondiso oyidingayo. Hlola imiphumela ekupheleni kwehlobo, futhi uzoqonda ukuthi yini okumelwe ukwenze ngokulandelayo.
I-Horoscope ye-Scorpio indoda ngo-2015
Izinkanyezi zeluleka amadoda aseScorpions ukuba abukeze amacala aqoqwe. Umkhakha wezemisebenzi ngeke ulethe noma yini entsha, ukuzinza kuzobusa kuwo. Ngezinye izikhathi ekugcineni kuzoba namathuba abonakala sengathi ayalimaza, kodwa ungazihlambalazi ngokuba ungafuni ukuwazama - angeke alethe intuthuko enkulu kunoma yikuphi, kodwa azokwengeza izindleko. Ngezinye izikhathi kungcono ukulinda kancane.
Impilo, ngakho-ke ayinasici, ingahle ihluleke-ungayigodli usizo lwezokwelapha, ikakhulukazi esigabeni sokuvimbela. Amadoda ama-Scorpios amancane kakhulu kunabanye ukuzwa ukuthi odokotela badinga kuphela uma kukhona okulimazayo, futhi kuyadingeka ukugcina kuze kube isikhathi lapho ubuhlungu obungeke bubekezelele khona. Lena umbono ongalungile. Ukuvimbela nokwelashwa odokotela akuyona ubuthakathaka, futhi ukubekezela kulokhu kuwubuhle obuhle. Ukwelashwa kwesifo esasungulwa ekupheleni konyaka kungabiza kakhulu kuzo zonke izinzwa kanye nokuhlangenwe nakho okungajabulisi okungaqinisekisi isixazululo esiyimpumelelo. Okokuqala kuhloswe nge-stomatology kanye nesimo sezitho zangaphakathi, ikakhulukazi izinso.
Uthando ubudlelwane beScorpio amadoda kulo nyaka luyoba ngaphansi kwethonya elixubile leNyanga neNeptune, ngeke babe nokukhathazeka, okuyinto wena nabathandekayo bakho abangase bakujabulele. Ukuthuthukiswa okuphoqelelwe kwezenzakalo, kokubili ubudlelwane obusungulwe, kanye nalabo abasanda kuvela, kungenzeka kuphela ekupheleni kwehlobo.
I-Horoscope ye-Aquarius-Abesifazane ngoNovemba 2016
I-pasta ne-turkey namakhowe
Ukunakekela izipikili ze-acrylic
Gwema isisindo ngaphandle kokulimaza izinwele: ukudla kwezinwele
I-tartar pie ngenyama
I-varnish ayomile ngesikhathi sokumisa kusuka ku-LCN
Amakhemikhali anesipila, njengendwangu yokudla okuthandayo